Nagu saabsan - Jiangsu Huanneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd.
Ku soo dhowow Huanneng
Jiangsu Huanneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2001, waxaan inta badan soo saarnaa waxyaabo heer kulkeedu sarreeyo oo kuleyliyaha carbide ah, Tan iyo markii aan aasaasnay, waxaan soo saareynay alaabooyin teknolojiyad iyo tayo sare leh leh ruuxa hal-abuurnimo joogto ah. 2006, waxaan lashaqeynay Machadka Cilmi baarista Qalabka Silicon Carbide si loo horumariyo walxaha kuleyliyaha carbide-ka cusub, waxaanan aqbalnay qalabka wax soo saarka cusub iyo teknolojiyadda ugu dambeysay ee wax soosaarka warshadaha, SICTECH brand silicon carbide waxyaabaha kululaynta ee aan soo saarnay ayaa macaamiisha si wanaagsan u soo dhaweynay.
SICTECH waxay bixisaa qeexitaanno kala duwan oo ah waxyaabaha kuleyliyaha carbide ee tayo sare leh: nooca GD (rod toosan), HGD (nooca tooska ah ee cufnaanta sare), nooca U, nooca W (seddex waji), nooca LD (hal xaraf), LS (dun laba jibbaaran) ) nooca iyo alaabada kale, heerkulka kululaynta dusha sare ee ugu sareysa wuxuu gaari karaa 1625 digrii Celsius.
Waxyaabahayagu si ballaaran ayaa loogu isticmaalay warshadaha daaweynta kuleylka sida muraayadaha, dhoobada, qalabka magnetka, metallurgy budada, waxaana loo dhoofiyey in ka badan 30 dal iyo gobollada adduunka.
Carburizing, nitriding iyo annealing qaybo bir ah
Deminta iyo xanaaqa wasakhda kala duwan, fiilooyinka birta ah, iwm.
Daaweynta dhalaalaysa ee xarkaha caaryada
Xadgudubka iyo alxanka qaybaha mashiinka
Falanqaynta kaarboon ama baaruud
Sintering iyo calcination of ferrite
Daaweynta kuleylka ee saxanka birta caadiga ah, birta, fiber optic, disc optical iyo wixii la mid ah
toogashada iyo soo saarista dhoobada iyo fijarka dhalada
rasaasta alaabada ceeriin ee quartz
Tijaabinta diidmo kala duwan
Foornada Nadiifinta, foornada xaalufisa
Foornooyinka kala duwan ee heerkulka sare
Gubashada qalabka gaaska iyo gaaska
Alaab Tayo Sare leh
Waxyaabaha Qiimaha Wax ku oolka ah
Waqtiga Gaarsiinta Ugu Dhaqsaha Badan
Shirkaddayadu waxay leedahay koox farsamo yaqaanno heer sare ah, kuwaas oo dooran kara nidaamka naqshadeynta ugu fiican ee ku saleysan khibradeena wax soo saar iyo astaamaha wax soo saarka si loo siiyo dadka isticmaala adeegyo naqshadeyn ah.Waxaan leenahay awoodo horumarineed oo sarreeya, waxaanna horumarin karnaa kulleejyeyaal qaas ah sida waafaqsan shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha, iyo sidoo kale waxaan ku siin karnaa macaamiisha badeecooyin loo habeeyay iyadoo la raacayo xaaladaha gaarka ah ee isticmaalka.